महानायक राजेश हमालले जन्मदिनमा पाए साइकल उपहार, कसले दियो साइकल (भिडियोसहित)
June 11, 2020 737
महानायक राजेश हमा”लले आफ्नो ५६ औं जन्मदिन फरक तरिकाले मनाएका छन् । हरेक वर्ष उनले कुनै मन्दीर र अप्ठेरोमा परेकाहरुलाई सहयोग गरेर जन्मदिन म’नाउने गरेका थिए । तर लक’डाउनका कारण अहिलेको उनको जन्मदिन फरक भएको छ ।
घरमा सामान्य तरिकाले श्रीमतीसंग जन्मदिन मनाए’का राजेशले साँझ भने एउटा रेष्टुरेण्टमा सामान्य तरिकाले के’ही सिमित साथीका बिचमा जन्मदिन मनाएका छन् । यो पटकको जन्मदिनमा एक जना साथीले साइकल उपहार दिएका छन् । लकडाउनमा आफ्नो स्वास्थ्य र शा’रिरीक सुगठनमा ध्यान दिने गरेका छन् ।
उनले घरमै आफ्नो शरिरको तौल ब्यवस्था’पन गर्ने तरिकाको एक्सरसाइज गरेका भिडियो र तस्बिर सार्वजनिक हुने गरेका छन् । लकडाउनका समयमा उनले श्रीमतीसंग विताए’का रमाइला पल’का भिडियो पनि सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । लकडाउनका कारण घर वाहिर निस्कन नपाएका राजेशले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सामाजिक र राजनीतिक विषयमा आफ्ना धारणा पनि सार्वज’निक गर्दै आएका छन् ।
उनले हालै सिमानाको विष’यमा जसपाका सांसद सरिता गिरीले दिएको अभिब्यक्तिको विषयमा पनि धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले त्यसवाहेक लकडाउनमा कसरी आफ्नो समय’लाई राम्रोसंग ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र कोरोनावाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषय’मा पनि जाकारी मुलक सामग्री सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
आफ्नो ५६ औ जन्मदिन मनाउदै गरेका नायक राजेश’ले आफ्नो उमेरका बारेमा संधै ठट्यौली जवा’फ दिने गरेका छन् । उनले आफु जहिले पनि जवान महशुष गर्ने र उमेरका बारेमा कहिल्यै न’सोच्ने बताएका छन् ।
निकै ढिलो विवाह गरेका राजेश हमाललाई विवाह अघि जहिले पनि आउने एउटा प्रश्न थियो कहिले विवाह गर्ने ? अ’हिले उनको मधु भट्टराईसंग विवाह भएको ६ वर्ष पुरा भएको छ ।
अहिले उनको फ्यानको प्रश्न फेरीएको छ । उनलाई अहि’ले कहिले बच्चा जन्माउने ? भनेर सोध्ने गरेका छन् । विवाह लगत्तै नायक राजेशले आफुहरुले बच्चाको बारेमा नसोचेको बताए’का थिए । त्यस पछि पनि सोही प्रश्न दोहोरीने गरेपछि राजेशले त्यस’को जवाफ पनि ठट्यौली पाराले दिने गरेका छन् । भिडियो हेर्नुहोस्…
Prevआज थप २५० जना संक्रमित थपिए, कुन जिल्लामा कति ? हेर्नुहोस्
Nextभोलि जेठ ३० गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस्
ल्वाङका खानुका छन् यती धेरै फाइदा, सबैले पढेर थाहा पाउनुहोस्